ရွှေဖီမိုးလွတ် (First Flush Tea) - Myanmar Tea Products of U Kar Ka
ရွှေဖီမိုးလွတ် (First Flush Tea)
3000 ~ MMK
Shwe Phi Moe Lout (First Flush Tea)
This particular strand of tea leaves are cultivated at its peak before the beginning of the monsoon season when the oil, fragrance, texture are at perfection, in order to create most outstanding blend. The first flush variety’s unique properties goes from bitter to sweet while resting on the palate and is preferred by those who like to enjoy savoring the taste.
လက်ဖက်ပင်များမှ (မိုးမကျခင်) သကြ်န်မတိုင်ခင်ထွက်ရှိသော ပထမဉီးဆုံးလက်ဖက်အညွန်းများဖြင့်သာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သကြ်န်မိုးမကျခင် နှစ်တစ်နှစ်၏ပထမဉီးဆုံး ထွက်ရှိသောလက်ဖက်ညွန့်များသည် သဘာ၀အဆီအနှစ် အပြည့်၀ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ရာသီဥတုကောင်းမွန်သောအချိန်တွင် ခူးဆွတ်ထားသောလက်ဖက်ညွန့်များမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အနံ့အရသာအထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
ရွှေဖီမိုးယ်လွတ်လက်ဖက်ခြောက်၏ထူးခြားသောအချက်မှာ သောက်သုံးပြီးပြီးချင်းတွင် ခါးသက်သောအရသာကိုခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး ခဏကြာလျှင် အချိုပြန်သောအရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို တစိမ့်စိမ့်အရသာခံသောက်သုံးသူများအတွက် သုံးစွဲရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Fried Assorted Bean (အကြော်စုံ) 160g
1600 ~ MMK
ပင်လောင်း 400g (Pin Laung Tea)
လှော်သင်းနံ့ 400g (Roasted Tea)
ဇယန်းချဉ်နံ့ 400g (Zayan Chin Tea)
Copyright© 2018 - 2022. All rights reserved by U Kar Ka Company
Developed By MA-Technology Myanmar